Tumira mafaira nekukurumidza pasina kuvhura Mail pane macOS | Ndinobva mac
Kurumidza kutumira mafaira usina kuvhura Tsamba paMacOS
Takazvitaura kakawanda, kuita zvinhu paMac makomputa neiyo macOS system iri nyore kwazvo uye kana isu tichiziva zvakakwana mafirifafomu akagadzirwa neApple mainjiniya, zvese zviri nyore. Muchikamu chino ini ndoda kukuudza maitiro ekukurumidza kutumira faira usati watanga kuvhura iyo Mail application.
Zviripachena kuti kuti uite zvandiri kuzokuratidza, mu Sarudzo dzeSystem> Internet Accounts, iwe unofanirwa kunge wakapinda maemail account ako kuitira kuti tsamba inoshanda zvakakwana, zvikasadaro iwe unogona chete kutumira maemail kubva kuICloud account.
Icho chokwadi ndechekuti macOS mune zvine chekuita nekuratidzwa kweLois mafaera akasiyana zvakanyanya kubva kune atinogona kuwana mune mamwe masystem uye patinosarudza, semuenzaniso, gwaro rePDF pane iyo Mac desktop, nekungodzvanya nzvimbo bhaa denga remakomputa rinotitaridza kufanoona kweiyo faira kuburikidza naro isu tinogona kunyange kutendeudza iwo mapeji ezvakataurwa zvinyorwa kuti tione zvemukati.
Nekudaro, kana tikanyatso tarisa kuwindo rekutarisa tinozoona kuti pane zviito zvakawanda zviripo. Pamusoro tinowana bhatani riine application yekushomeka yatinokurudzirwa kuvhura iyo faira. Nekudzvanya pane iri bhatani, iyo sisitimu inotangisa iyo application iri mubvunzo uye kuvhura iyo faira.
Nekudaro, kana izvo zvatinoda kuita zvimwe zviito, kusanganisira kutumira iyo faira neMeyili, zvese zvatinofanirwa kuita kudzvanya bhatani rekona nemuseve unobuda muchikamu chepamusoro kurudyi chehwindo kuitira kuti Kuongorora kutiratidze runyorwa ne sarudzo dzatinogona kuita nefaira. Muchiitiko ichi, kana uchidzvanya paMessage sisitimu inotora iyo faira, inovhura iyo application yeMail otomatiki, Isa icho uye usiye zvese zvakagadzirira isu kuti tiise iyo yekuenda email uye izvo zvine basa.
Maitiro akareruka ekuti kana iwe uchizofanira kutumira mafaera mazhinji pasiri neMail zviri nyore pane kumhanyisa kufambiswa kwebasa kwese kweVhura iyo Mail application, tsvaga iyo faira iri mubvunzo uye urizvuzvurze kuwindo reMail uye nyora kwainoenda kero uye chidzidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Kurumidza kutumira mafaira usina kuvhura Tsamba paMacOS
Ndizvozvo zviri nyore kwazvo kugovana mafoto ako pasocial network kubva kuMac yako
Apple patents kirabhu isina mvura yeMacBooks